Indlu yeeNdwendwe eShelburne-iRanchi
Into entle malunga nekhaya lam eShelburne yindawo kunye noxolo noxolo. Imizuzu eyi-10 yokuqhuba ukuya eGreenfield Rotary, I-91. Imizuzu eli-15 yokuqhuba ukuya eBerkshire East Mountain Resort, imizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwiLali yaseShelburne Falls, iindlela zokuhamba intaba, iindlela zebhayisekile, iiLedge eziPhakamileyo, kunye neBhulorho yeentyatyambo. Ihlaziywe ngo-1964 kwikhathalogu yeSears Roebuck ekhaya. Iqaqambile kwaye inelanga! Ikhitshi lendlu enkulu yasefama, amagumbi okulala ama-3 apholileyo anesomisi kunye nesipili sokukhulula igumbi lokuhlambela. Wamkelekile kwikhaya lakho leholide! Akukho Zilo-zilwanyana zasekhaya, ipropati engeyomsi.
Yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Iivenkile ezinkulu zihamba ngemizuzu emihlanu. Ukungena kwaBucala. Indawo yokutyela ekufutshane. Igadi enkulu ngasemva enendawo yomlilo. Kunikezelwe ikofu kunye neti. Ngesidlo sakusasa ubuya kufumana igrosari okanye uye kwiivenkile zethu zekofu ezikufutshane kunye neendawo zokutyela!
Jonga incwadi yam yesiKhokelo ngolwazi lwendawo, umtsalane, imisebenzi, iindawo zokutyela kunye neevenkile ezinkulu.
Indawo enoxolo yokuhambahamba, ukubaleka, okanye ukukhwela ibhayisekile. Ukuqhuba imizuzu emihlanu ukuya kwiindawo zokutyela ze-gourmet kunye neevenkile zekofu.
Ndikhona xa ufuna uncedo. Umsebenzi wam kukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ukuze ufune ukubuya!